Ebe nrụọrụ weebụ kacha mma ere foto ụkwụ | Androidsis
Weebụsaịtị kacha mma ere foto ụkwụ
Aaron Rivas | 28/11/2021 07:12 | Emelitere ka 28/11/2021 07:22 | Ngwa gam akporo, Mobiles
Ụkwụ, maka ọtụtụ ndị, bụ akụkụ ndị na-akpali akpali, na ọ bụ nke ukwuu nke na nke a nwere ike ịga na mmekọahụ. N'ihi nke a, na n'etiti ihe ndị ọzọ nwere ike ịbụ nke onwe, ọtụtụ ndị (ọ bụghị nanị ndị inyom, kamakwa ndị ikom) erewo ma ọ bụ chọọ ịre foto nke ụkwụ ha. Nke a bụ n'ihi na e nwere ahịa maka ya, a na-ahụkwa ya na Ịntanetị site na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche na nyiwe dị iche iche nke na-enye ohere ịzụta na ire ụdị ihe osise foto a, bụ nke na-abụkarị ihe bara nnukwu uru maka ọtụtụ fetishists.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ere ụkwụ foto (ma ọ bụ "ụkwụ foto", dị ka ọtụtụ ndị na-ekwu) ma ọ bụ na ị nwere mmasị, ebe a bụ ụfọdụ ebe kachasị mma ị nwere ike ime ya. Site na ndị a ị nwekwara ike ịzụta foto ndị a, ya mere ọ bụ maka ndị na-ere ahịa na ndị ọchụnta ego yana ndị na-azụ ahịa na, dị ka anyị kwuru, ndị fetishists na-eji ụdị foto a kpọrọ ihe ma nwee ike ịkwụ ụgwọ nnukwu ego maka naanị otu ma ọ bụ otu ụzọ. Ya mere, ka anyị nweta ya.
N'okpuru, ị ga -ahụ ọtụtụ egwuregwu egwuregwu ịkekọrịta ihuenyo ọkpụkpọ abụọ kacha mma maka ekwentị gam akporo. Ọ dị mma ịmara, dịka anyị na -eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
Otú ọ dị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ micropayment dị n'ime, nke ga-enye ohere ịnweta ọdịnaya ndị ọzọ n'ime ha, yana ịnweta ohere egwuregwu na ọkwa, ọtụtụ ihe, ihe nrite na ụgwọ ọrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ikwugharị.
1 Gịnị mere ndị mmadụ ji ere ma zụta foto ụkwụ?
1.1 Ihe onwunwe
1.2 Maka ojiji dị iche iche
2 Ndị a bụ saịtị kacha mma maka ire foto ụkwụ
2.1 Ndị naanị
2.3 Onye na-achọta ụkwụ
Gịnị mere ndị mmadụ ji ere ma zụta foto ụkwụ?
Tupu ikwu okwu banyere saịtị kacha mma ire na ịzụta foto nke ụkwụ, anyị ga-dokwuo anya ajụjụ ndị ị na-ajụ onwe gị n'ezie na ha bụ. Gịnị mere mmadụ ji azụta foto ụkwụ? na "Gịnị kpatara onye ọ bụla ga-ere ha?" (nke ikpeazụ nwere azịza doro anya). Ajụjụ ọzọ nke bụkwa nnọọ yiri bụ ajụjụ nke «gịnị bụ mmasị eme na gịnị mere ị na-azụta ha?». Ọfọn, mgbe ahụ, anyị ga-enye ihe kpatara ya.
Fetishes bụ ihe ụtọ ndị ahụ dị ịtụnanya na-amasị ọtụtụ oge na-akpakọrịta na mmekọahụ, ọ bụ ezie na ha agaghị aga otú ahụ. Otú ọ dị, mgbe anyị na-ekwu banyere fetishes banyere foto ụkwụ (nke na-abụkarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị ndị ikom), ọ bụ ihe doro anya na onye ọ bụla na-azụ foto ụkwụ na-azụta ha n'ihi mmekọahụ. N'ihi nke a, ha dị njikere ịkwụ ụgwọ nke ga-adị ka ihe efu ịhụ ụkwụ nke nwanyị ahụ rere foto ndị a. N'ihi ya, dị nnọọ ka e nwere ndị nwere ike ịzụrụ ihe, e nwere ndị nwere ike ịre ahịa na-erite uru na nke a.
Maka ojiji dị iche iche
Ọtụtụ bụ ndị nwere ike ịnwe ebumnuche ịzụta foto ụkwụ maka mgbasa ozi, ịzụ ahịa, mgbasa ozi na imepụta onyonyo. Ha nwekwara ike ịbụ ihe ọrụ enweghị ikike nwebisiinka nke enwere ike itinye n'ọrụ, akụkọ na ụdị akwụkwọ ọ bụla. Ọzọkwa, e nwere ndị na-azụta foto nke ụkwụ iji mee logo, akwụkwọ ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Isi ihe bụ na Ọ bụghị nanị na ọ metụtara ụfọdụ fetis; Ịzụta foto ụkwụ aghọwokwa ihe a na-emekarị maka nzube ọ bụla. Ọ bụ ya mere na e nwekwara ọtụtụ ndị na-ere ụdị foto a, ọ bụghị iji mee ka ndị ọrụ ndị ọzọ nwee mmasị na mmekọahụ ma ọ bụ ihe ụtọ.
Ndị a bụ saịtị kacha mma maka ire foto ụkwụ
Ugbu a, anyị na-eji ibe weebụ kachasị mma - yana ndị a na-ejikarị eme ihe - iji ree foto ụkwụ na ịntanetị.
Ọ dịghị mkpa ka ị jiri ma ọ bụ jirila saịtị a chọpụta maka ya, nke ahụ bụkwa n'ihi na ọ bụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ a na-ejikarị eme ihe n'ụwa maka ire ihe foto. Ụdị eji n'elu ikpo okwu a dị iche iche; ebe a ị nwere ike ịhụ ọdịnaya dịka foto, vidiyo na mgbasa ozi gbasara osisi, ntụziaka ma ọ bụ, nke ọma, ụlọ; Na tiori, ikpo okwu na-enye gị ohere ịhọrọ isiokwu ịhọrọ site na bulite foto nke ihe ọ bụla.
Otú ọ dị, OnlyFans kacha mara amara maka inwe mmekọahụ na agụụ mmekọahụ maka ndị okenye, nke mere na ọ na-ejikarị ụdị na ndị na-eme ihe nkiri na-ere foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị ka ịgba ọtọ, ọkara ọtọ na, n'ihe gbasara okwu a, ụkwụ.
Usoro eji eme ihe dị mfe. N'ụzọ bụ isi, enwere usoro nke ndị ọrụ denye aha na ibe ndị okike ọdịnaya site na ya otu kwa ọnwa ka ịhụ foto gị, vidiyo na ihe niile dị na ibe. Na n'ihi na nke a, n'ihi na ọ nwere ike monetize ọdịnaya, ndị ọrụ na-eji ya na-ere na ọbụna ịzụta foto nke ụkwụ, ma site na ndenye aha obi ụtọ, ee. Ị nwekwara ike ịzụta ụfọdụ ọdịnaya naanị site na sistemụ ha, ihe na-eme ka ọ dị mma maka ndị nwere mmasị na ụkwụ onye ọzọ ma ghara ịchọ ụdị ọdịnaya ndị ọzọ.
Na-eri nri bụ obere izugbe karịa Onlyfans, ebe ọ bụ na saịtị a bụ ihe niile gbasara ụkwụ. N'ebe a, ị nwere ike ịzụta ma ree foto ụkwụ n'ụzọ dị mfe yana na obere ọrụ, ebe saịtị ahụ na-edobe naanị 10% nke uru gị.
Otú ọ dị, ị ga-agafe nkwenye nke a ga-akwadorịrị ka ị bụrụ onye na-ere ahịa na ibe, Ihe nwere ike were n'etiti 2 na 3 izu, gụọ usoro eji eme ihe ma kwenye na ihe niile; ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike ire ere na Instafeet. Ha na-eme nke a iji gbochie ndị omekome nwere ike ikpuchi ikpo okwu.
Onye na-achọta ụkwụ
Nhọrọ ọzọ kachasị mma taa iji ree foto nke ụkwụ bụ Onye na-achọta ụkwụ, ebe nrụọrụ weebụ na-akwụghị ụgwọ nke na-enye ohere ịzụ ahịa nke ụdị ọdịnaya a. Karịa nke ahụ, o lekwasịrị anya na ya. Na mgbakwunye, uto ya dị ngwa ngwa, ọtụtụ puku ndị ọrụ na-eji ya were foto nke ụkwụ wee kpuchie mkpa onwe ha na ọbụna fetishes.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Weebụsaịtị kacha mma ere foto ụkwụ
Ngwa 5 kacha akwụ ụgwọ kacha mma ị kwesịrị ịnwale ma nwee tupu njedebe nke 2021
Ngwa 5 kacha mma iji mee ahịrị bọọlụ maka gam akporo